Sidee Al-Shabaab maxaabiista ugala baxdey Jeelka Boosaaso?
Al-Shabaab oo maxaabiis kala baxdey xabsiga Boosaaso
Posted On 05-03-2021, 04:30AM
BOOSAASO, Puntland - Weerar ay Al-Shabaab ay xalay saqdii dhexe ku ekeysay saldhiga weyn ee xarunta ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa waxaa ku baxsatay maleyshiyo ka tirsan xoogaga gacansaarka la leh shabakada Al-Qaacidda, sidda ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin dhanka ammaanka.
Sidda laga soo xigtay taliye Maxamuud, waxaa jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu weerarkaan kasoo gaarey askarta iyo taliyaha Jeelka. Balse ma fahfaahin.
Warar madax-banaan ayaa tibaaxaya in dhimashadda ay tahay sideed askari oo isugu jirta askartii ilaaladda ka ahayd saldhiga iyo kuwa gurmadka u tegay meesha.
Al-Shabaab ayaa warisay in 400 maxaabiis ay kasii deysay Jeelka. Balse, illaa haatan ma jiro xaqiijin rasmi ah oo kasoo baxdey dhanka Dowladda Puntland.
Warbixinadda ayaa tibaaxaya in maxaabiis ay xoogaga gacansaarka la leh Al-Qaacida ay kasii daayeen jeelka ay kuwa aan khuseyn kusii daayeen magaaladda.
Isaga oo si gaar ah u dul-istaagay arrinta maxaabiista, taliye Maxamuud ayaa ka dhawaajiyey ay hubin kuwadaan tiradda guud iyo rag kale oo uu ka dhawaajiyey in ay kasoo qabteen dibada kuwaa soo uu tilmaamay in laga yaabo in ay ku dhex-jiraan qaar kamid ah dableyda weerarka qaadey.